संविधान बनेकाे ३ वर्षपछि कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन, काे काे परे ? | mulkhabar.com
संविधान बनेकाे ३ वर्षपछि कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन, काे काे परे ?
September 18, 2018 | 9:45 am 207 Hits
संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा रहेका सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य सम्मिलित समिति गठन भएको हो । संविधानको धारा ५४ को व्यवस्था अनुसार समिति गठन भएको गाेरखापत्रमा समाचार छ ।
यस्तै, प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगको नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति, श्रम तथा रोजगार र सामाजिक न्यायसम्बन्धी नीति रहेका छन् । यस्ता नीतिबारे सरकारले गरेका काम कारबाही वार्षिक रूपमा राष्ट्रपति समक्ष पेस हुनेछ ।
सो प्रतिवेदन संसद्मा पेस हुनेछ । यसरी पेस भएको प्रतिवेदन र नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यले गरेका काम कारबाही गठित समितिले गर्नेछ ।